သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည်ကို အချက်အလက်ဖြင့် ရှင်းပြပါ ဆရာတို့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Islam » သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည်ကို အချက်အလက်ဖြင့် ရှင်းပြပါ ဆရာတို ့
သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည်ကို အချက်အလက်ဖြင့် ရှင်းပြပါ ဆရာတို ့
Posted by အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး on Jun 15, 2012 in Islam, Science & Religion | 44 comments
ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွ ကမန္မ်ား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္
ရခိုင်ရာဇဝင်ထဲက ကမန်တိုင်းရင်းသားတို ့သည် အိမ်နီးနားချင်း ဆက်စပ်နေသော
နိုင်ငံတစ်ခု၏ လူမျိုးတစ်မျိုးမှ ပေါက်ဖွားလာသော မျိုးနွယ်စုတစ်မျိုးမဟုတ်၊““မည်
သည့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတွင်မှ ကမန် ဟူသော အမည်ဖြင့် လူမျိုးများနေထိုင်
ကြကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား များလုံးဝမရှိပါ””။
ကမန်မျိုးနွယ်စုသည် ရခိုင်လူမျိုးစုကြီးတွင် အထင်အရှားပါဝင်နေပြီး ကမ္ဘာအရပ်
ရပ် မည်သည့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံ များတွင်မျှ ကမန်လူမျိုးစုနှင့်မျိုးနွယ်တူ တိုင်းတပါးသား ကျောထောက်နောက်ခံ လူမျိုးဟူ၍ လုံးဝမရှိသော မြန်မာနိုင်ငံနွယ်ဖွား မျိုးနွယ်စုတစ်စု
သာဖြစ်ကြောင်း၊နိုင်ငံတော်၏ သမိုင်းစဉ် တလျှောက်တွင် မည်ကဲ့သို ့အခက်အခဲများ
ကြုံကြိုက်ခဲ့ပါစေ၊တိုင်းတပါးနိုင်ငံများသို ့လူမျိုးစုအလိုက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်း၊တိုင်းတပါး အားကိုးအားထားပြုခြင်းများလည်းမရှိဖူးပါချေ။
အစ္စလာမ်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ပြီး ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းပင် ဆက်လက် နေထိုင်လျှက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ကမန်များမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းကြပြီး မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်ကြ
သော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တစ်စုဖြစ်သည်။““အမေကျော် ဒွေးတော်လွမ်းစရာ
နိုင်ငံရပ်ခြား သံယောဇဉ် တစ်စုံတရာမရှိပါ။””
ကမန်မျိုးနွယ်စု သည်ရခိုင်ဘုရင့် တပ်မတော် “လေးသည်တော်”တပ်ကို အစွဲပြုရာ
မှပေါ်ပေါက်လာသော ဘုရင့်တပ်မတော်၏ အမည်နာမကိုသာ အကြောင်းပြုသော လူ
မျိုးစုတစ်စုသာဖြစ်ပါသည်။ထို ့ကြောင့် ကမန် သည် ရခိုင်ထဲမှ ရခိုင်များသာဖြစ်ကြ
သည် ဆိုသည့်အကြောင်းအရာကို မမှန်ကန်ကြောင်း ငြင်းချက်ထုတ်နိုင်မည် မဟုတ်
သမိုင်းနေ ့စွဲများထဲက မှတ်သားစရာနောက်တစ်ခုက ၁၉၅၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၇-၈-၉)ရက်များတွင် စစ်တွေမြို ့၊ဝင်္ဂဘာကွင်းကြီး အတွင်းရှိ မဏ္ဍပ်ကြီးအ
တွင်း၌ ဝတ်လုံ ဦးရွှေဘော်က သဘာပတိ၊ဦးလှထွန်းဖြူက အခမ်းအနားမှူး၊ဦးစောထွေးအောင် ကအတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တင်မြှောက်၍ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာညီ
(၆)ရခိုင်ပြည် မူဂျာဟိန်းတို ့အား နှိမ်နှင်းသော အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အားချီးကျူးရေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော မြို ့နယ်များရှိ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်-မွတ်စလင်မ်များ ဘာသာဝင်များနှင့် ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားနှိပ်စက်ညှင်းပန်း
သော မူဂျာဟိန်း သောင်းကျန်းသူများကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းပေးသော တပ်မတော်နှင့်
အစိုးရအား ဤညီလာခံ ကြီးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအဆိုကို
မြိုင် က တင်သွင်းခဲ့ပြီး မောင်တော
မြို ့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစံအောင်ကျော်နှင့် ရသေ့တောင်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာကျော်တို ့ကထောက်ခံလျှက် တက်ရောက်လာသူ
အားလုံး သဘောတူလျှက် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုကြကြောင်း။
(ရခိုင် ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ စာမျက်နှာ -၁၂)
ရည်ရွယ်ချက်။။လူတစ်ဦးချင်းစီ သော်လည်းကောင်း၊မျိုးနွယ်စု တစ်စုချင်းစီ သော်လည်းကောင်း မိမိတို ့၏ ကာယ၊ဉာဏ စွမ်းပကားကို စွမ်းအားရှိသရွေ့အစွမ်း
ကုန် စုစည်းကာ မိမိတို ့သက်ဆင်းလာသည့် သမိုင်းကြောင်း မျိုးရိုးကို မိမိ
ဖော်ထုတ်တင်ပြခြင်းဖြင့် ညီအစ်ကိုရင်းချာ များဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားများ နှင့် တစ်ဦး
နှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင်ယုံကြည်လေးစား ရင်းနှီးမှု ပိုမို ဖွံ ့ဖြိုးလာကာ နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွား
များကို ဆထက်တပိုး သယ်ပိုးဆောင်ရွက် နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
သစ် တည် says:
သမိုင်းတော့ လေ့လာမှုအားနည်းလို ့မသိပါဘူး..
အာကိုက ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံး ရိုဟင်ဂျာပဲ ဖြစ်နေပေါ့..ဗျာ….
အာကို ့လို လူမျိုးတွေ လိုအပ်ပါတယ်..လို ့ပဲ..
ခိုးဝင်လာတဲ့ အစွန်းရောက် များကို ရှုတ်ချဖို ့တော့ လိုပါတယ်….
ဥလေးက အမှန်တွေ တယ်ပြောတတ်ပေသကိုး
ဟုတ်တာပ ၊ မှန်ပေတာပ ။
ကျွန်တော်နေတဲ့ kelantan မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ရခိုင်ကောင်မလေးတွေ ကို islam ဘာသာဝင် ကိုxxxx က (နာမည်မရေးပါနဲ့ဆိုလို့) ၂ ရက်ခန့်အလုပ်ပျက်ခံ၍ သဌေးနှင့် ရန်ဖြစ်၍ islam အမည်ခံ အစွန်းထွက်များ၏အနှောက်မှ ကာကွယ်ပေးခဲ့ကြောင်း…သိတာလေးရေးတာပါ rohinja လိုမထုနဲ့နော်..p;
(အာကို ့လို လူမျိုးတွေ လိုအပ်ပါတယ်..လို ့ပဲ..
ခိုးဝင်လာတဲ့ အစွန်းရောက် များကို ရှုတ်ချဖို ့တော့ လိုပါတယ်….)ဒါလေးကြောင့် မန်းလိုက်တာပါ
အူးဗိုက်ရေ. ကျနော့်အသွေးအသားထဲမှာ ဘင်္ဂါလီသွေးမပါပေမယ့် တဖက်ကကျနော်
သူတို ့အပေါ် ရှုတ်ချသလို၊အပြစ်လဲမပြောရက်ပါဘူး။ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ခုလိုအကြမ်း
ဖက်မှုတွေ နေ ့စဉ်ရက်ဆက်ကြားနေရတော့ စိတ်လဲမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါဟာ
ရှေ ့အစဉ်အဆက်က နယ်စပ်ကပေါ့လျော့မှုတွေ၊ဦးနု လက်ထက်ကပင်စတင်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာ။
ဒါကို ဖြည်းဖြည်းဖြေရှင်းရမှာပါ။ကျနော်တို ့ကမန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ ့မျိုးနွယ်မတူပေမယ့်
ဘာသာတူဖြစ်နေတာရယ်၊သူတို ့ထဲမှာလဲ လူသားပီပီ အဆိုး၊အကောင်းဒွန်တွဲနေတာရယ်
ကြောင့် များများထင်မြင်ချက်မပေးလိုတာ နားလည်ပါဗျာ။
အခု ပြောနေတာက ရခိုင်မူစလင် ကို ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး နော် စစ် တွေက ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာ ကလားတွေကို ပြောနေတာ သံတွဲ က မွတ်စလင် က နာ ပြီး သမိုင်း ချီ ရေးနေတော့ မခက်ပေဘူးလား ခုချိန်မှာ ဘယ်လိုရေးရေး ရခိုင်က နားဝင်မှာလဲ မဟုတ်ဘူး ရခိုင်တွေ မြန်မာတွေက ဘယ်လို ရေးရေးလက်မခံဘူးဒီတော့နောက်ဆုံး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ သမထ ကြီးကို မြန် မာ တိုင်ရင်းသားထဲမှာ ဘင်္ဂ လီလူမျိုးတမျိုး ထပ်ထည့်ပေးဘို့ ပြောပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား
ရခိုင် ကမန် ရှမ်း ဗမာ တရုတ် ဘာ လူမျိုး ဖြစ်ဖြစ် အစ္စလမ် ဆိုရင် ကုလား ဖြစ် သွားတာပဲ သား ဦး ရေ ။ရိုဟင်ဂျာ ကို ဘင် ကါလီ ဖြစ်လို့လက် မခံ ပေမယ့် မြန် မာ ပြည်က တစ်ခြား မြို့နယ် တွေ က အစ္စလမ် ကို လဲ မလို လား ဘူး းပဲ ။ လူ့ ့အခွင့် အရေး တွေကို လေးစား လိုက် နာ တတ် တဲ ့လူ ့အသိုင်း အဝိုင်း နဲ့ဥပဒေ စိုး မိုး တဲ့လိုက်နာ တဲ့လူ ပီသ တဲ ့လူ တွေ နေတဲ့တိုင်း ပြည် ဖြစ်ဖို ့လို ပါတယ်။ မြန် မာ တွေ အမေရိကန် အင် ဂလန် စင် ကာ ပူ ဩစတေလျှ ကမ္ဘာ့ နိုင် ငံ အနှံ ့အပြား သွားနေထိုင် ကြတာပဲ မဟုတ် ဘူးလား ။ ပြသ၁ နာ မရှိပါဘူး။
အင်းဗျ ကိုဂွတို ကပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက်ရှိတယ်ဆိုပြီး သွားလုပ်မနေနဲ ့အုံး။
ထပ်တိုးဖို ့အကြံပြုတာလော ထားအုံးနော် ခုတောင်ချုံပုတ်ထဲက အနီရောင်ထမီ
ကျနော့်အထင် အနီကို အခု(၁၀၀)လောက်အထိခံချင်ပါရဲ ့။ပေးမယ့်လူ မရှိဘူးလား။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တခုပြောပါစေဗျာ လူသားအားလုံးကိုလေးစားတန်ဘိုးထားပါတယ် ကမ္ဘာ့ဘယ်ဒေသမှာနေထိုင်သည်ဖြစ် ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်စေ မည်သည့်ဘာသာကို ကိုးကွာ်သည်ဖြစ်စေအားလုံးဟာ လူပါဘဲ လူတွေဟာ လူ့ဘောင်ကောင်းဘို့ဆောင်ရွက်ရမဲ့တာဝန်ဟာ လူသားတွေရဲ့မွေးရာပါတာဝန်ပါဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရမှာ ဘာသာ နိုင်ငံလူမျိုးခွဲလို့မရပါဘူး ဒါဟာမွန်မြတ်တဲ့သူသားဝါဒပါ ဒါပေမယ့် လူတဦးတယောက်ဖြစ်စေ လူအစုလိုက်ဖြစ်စေ လူတမျိုးစုကဖြစ် တိုင်းပြည်တပြည်မှာ ပြဒါန်းထားတဲ့ တစုံတရာဥပဒေကိုဖေါက်ဖျက်ကျူးလွန်ပြီး လူ့ဘောင်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို
အန္တရယ်ပြုလာမယ်ဆိုရင် ဘာသာတရားကိုခုတုံးလုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးရေးကိုခုတုံးလုပ်ရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒါဟာလူသားအားလုံးရဲ့ရန်သူဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မင့်မြတ်လို့ထင်နေကြသူတွေဟာ အထူးသဖြင့် မိမိမျိုးရိုးနိမ့်ကြနေမှုကိုဖုံးကွယ်ဘို့ကြိုးစားနေသူများပါ ဒါကြောင့်ဘယ်လူမျိုးကမြတ်တယ် နိမ့်တယ်ဆိုတာ လူ့အဆင့်အတန်းမပြည့်မှီသူတွေရဲ့ အဘိဓမ္မာ မှာသာရှိမှာ မြင့်မြတ်သူတို့မှာမရှိကြပါဘူး
ကမန်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ တခုတော့ပြောချင်ပါတယ် ကမန်ဆိုတာ ကပြားပါ ဘင်္ဂါလီနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး ဘင်္ဂါလီနဲ့လူမျိုးရေးယဉ်ကျေးမှုမတူပါဘူးစကားလဲမတူပါဘူး ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့က လူမျိုးတွေနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးနှစ်ခုပေါင်းမွေးလာတာပါ ရခိုင်မင်းဆက်များရဲ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဆက်လက်ကိုးကွယ်ခွင့်ရသူများသာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါကိုအငြင်းပွားနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဓိက ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာဘို့ နဲ့ကာကွယ်ရမယ့်တာဝန်ကိုသာဦးထိပ်ပန်ဆင်ရမှာပါ
နီနဲ့ငါနဲ့ကငယ် သူငယ်ချင်းတွေလေ ငါ့ကိုအနီတွေပေးရက်လားမလုပ်ပါနဲ့ကွာ မင်းကိုစတာပါ ငါသမထ ကြီးကို ပြန် ပြောပေးပါမယ် ငါ့ကိုတော့အနှိးတွေ မပေးပါနဲ့ ငါမှာ ကလေးလဲမွေထားတာ မရှိသေးလို့ပါနော် နောက်လိုရင် ပြောပါ့မယ် တာ တာပါ
မဆိုင်ပေမယ့် မန် ့ချင်လာလို ့မန် ့လိုက်ပါတယ် ။
ကျုပ်အမြင်အရဆိုရင် ၊ မြန်မာနိုင်ငံသား ဆိုပါစို ့.. ခရစ်ယန် ဖြစ်ဖြစ် မူဆလင် ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ဘာသာ ကိုးကွယ် ကိုးကွယ် အဓိကမကြပါဘူး ။ မြန်မာ/ဗမာ တွေ ကို အစွန်းရောက်ကြတယ်လို ့အခုပြောနေကြပြီနော်…
(၁) မြန်မာ/ဗမာ လူမျိုး မှန်သမျှသည် ဘယ်ဘာသာဝင် လုပ်သောစီးပွားရေးမှန်သမျှ အားပေးကြသည် ။
တခြားဘာသာဝင်တွေ အထူးသဖြင့် မူဆလင် တွေဆိုရင် ၊ ဘယ် မြန်မာ/ဗမာ လုပ်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဖြစ် ၊ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ်ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ၊ ဘာသာတူ မူဆလင် အချင်းချင်းဘဲ အားပေးသည်။ နိုး မြန်မာ/ဗမာ ၊ နိုး တခြားဘာသာဝင်လူမျိုး ဘဲ။
(၂) မြန်မာ/ဗမာ လူမျိုးများ အထွဋ်အမြတ်ထားသော ဘုရားကျောင်းကန်များသို ့ဘယ်ဘာသာဝင် အလည် ရောက်လာပါစေ ၊ လက်သင့်ခံသည်။ ဘာမှမတား ။ ဖိနပ်တော့ချွတ်ပေါ့ ။ မူဆလင်တွေရဲ ့ဗလီ ထဲ ကို မြန်မာ/ဗမာ ဝင်လို ့ရလျှင် ဝင်းအတွင်းဘဲ ရမည် ။ အဆောက်အအုံထဲ ပေးဝင်လား ။
မြန်မာ/ဗမာ တွေ ဆိုတာ တော်တော်သည်းခံတတ်ကြတယ် ။ တောက ၊ နယ်ကလာပြီး အိမ်ဖော် ၊ အိမ်အကူ လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးလေးတွေ ၊ မူဆလင် အိမ်ကိုရောက်ရင် ၇၀%လောက်က မူဆလင် ဖြစ်ကုန်ကြတယ် ။ ဘယ်တုန်းက ဘယ် မြန်မာ/ဗမာ က မကျေနပ်လို ့ထပြောသံ ကြားခဲ့ဖူးကြလဲ ။ အေးနော်..တစ်ခုရှိတယ် ၊ မြန်မာ/ဗမာ က မူဆလင် ကို ဘာသာပြောင်းဖို ့မပြောနဲ ့ဦး ၊ လူငယ်ချင်းချင်း … မြန်မာ/ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ် က မူဆလင်မ တစ်ယောက် ကို ကြိုက်ရုံဘဲ ကြိုက်ကြည့်… ။ ကမ္ဘာပျက်မတတ် အကန် ့အကွက် ခံရမယ် ၊ ရန်ရှာခံရမယ် ။ ချောင်းရိုက် (သို ့မဟုတ်) ပေါ်တင် အရိုက်ခံ ရမယ် ။ အေး.. မူဆလင် က မြန်မာမ နဲ ့ညိတယ်နော် ၊ ဘယ် မြန်မာ/ဗမာ မှ ရေးကြီးဂွင်ကျယ်လုပ် မပြောဘူး ။ မူဆလင်တွေကတော့ အဲဒီ ညိတဲ့အတွဲကို မရမက မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဝိုင်းပံ့ပိုးပေးဦးမယ် ။
……. ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီးကျန်သေးတယ်နော်
ကိုသန်းထွဋ်ဦး ကို အားနာလို ့ဒီလောက်ဘဲ ။
ဘယ်သူ အစွန်းရောက်နေလဲ ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ဖို ့ကွန်မင့်လိုက်တာပါ ။
တခြား ဘာမှ မပါကြောင်းပါ ။
ကိုပေရေ. အားမနာပါနဲ ့ပြောနိုင်ပါကြောင်း။ဘာလို ့လဲဆိုတော့ ကိုပေ့အမြင်နဲ ့အတွေ ့အကြုံကို
ပြောတာဘဲလေ။လက်သင့်ခံပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကျနော်တို ့ဒေသဖြစ်တဲ့ သံတွဲမြို ့မှာ ကိုပေပြော
တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ တစ်ရွာတစ်ပုဒ် ဆိုလား
သေချာတာကတော့ မြန်မာ/ဗမာ လူမျိုးဟာ ကိုယ့်ကို ထိရင်တောင်မှ ၊ တော်ရုံဆို ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးတွေပါဗျာ ။
ကိုယ်ဘက်ကနစ်နာတယ်ထင်ရင် တရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုတတ်တဲ့ မှုစလင်ဘာသာဝင်တွေဟာ
ဘာကြောင့် အခြားဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာကျတော့ မျှတမှုမရှိတဲ့ ကျင့်ထုံးတွေကိုစွဲကိုင်ကျင်သုံးနေကြတာလဲ
တရားမျှတမှုဆိုတာ နှစ်ဖက်အကျိုးကိုမထိခိုက်မနစ်နာစေပဲ မျှမျှတတ ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်မဟုတ်ပါလား
@Oo Ooရေ ရခိုင်လူမျိုးတွေထဲမှာ ကမန် ပါတယ်လို ့ကျနော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၈၂၄နောက်ပိုင်းထဲက အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတာနော်။အဲ့ဒီတော့ ခေါင်းစဉ်ကို
“ရခိုင်လူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူတို ့အကြောင်း”လို ့ပေးရတာပါ။အဓိပ္ပာယ်
က ကမန်ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်လူမျိုးထဲပါ ပြီးဖြစ်လို ့ပါ။
ကိုနာဂရရေ ခင်ဗျားပြောပုံအရ ရခိုင်ကမန် မွတ်ဆလင်လူမျိုး တွေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဘယ်လောက်ရှိနေလို့လဲ….ရခိုင်မွတ်ဆလင်ဆိုတာကလဲ ကမန်တွေဘဲလား…?
ကျနော်တို့ရခိုင်နယ်မှာ တချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်လောက်ထွန်းကာခဲ့တယ်ဆိုတာ
စေတီပုထိုးတွေ ရှိနေကြတာ သာသနိကအဆောက်အဦးတွေ တခြားမကြည့်ပါနဲ့ မန်းတလေးက
ခင်ဗျားကြည့်ရတာ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ခုအချိန်မှာ ပြည်ပကအော်နေသလို မွတ်ဆလင်ဦးထုတ်တွေ
ဆောင်းပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုလှန် မျက်နှာရှေ့မှာထား ကိုရန်ကျမ်းစာကိုဖတ် ဒီလိုပုံမျိုး
မြန်မာပြည်မြေပုံပေါ်မှာတင်စေချင်တာထင်တယ် …. တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးလေးတွေ
ခင်ဗျားသိထားရမှာက ခုလိုရခိုင်နယ်ကြီးမှာ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေ စိမ့်ဝင်နေတဲ့အချိန်
ထကြွသောင်းကျန်းနေတဲ့အချိန် ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ထဲကလဲ တရာမဝင်နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့တဖက်နိုင်ငံက
အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ စိမ့်ဝင်နေကြတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးမှာ ရိုဟင်ဂျာအပါအဝင်
အခြားမွတ်ဆလင်( ဘာသာတူညီနောင်တွေပေါ့ဗျာ)က ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုးတွေထက်ပိုများနေကြပြီ ။
ကျနော်တို့သဘောပြောမယ်နော် မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာမွတ်ဆလင်ဆိုတာ လက်ခံတယ် ရခိုင်မွတ်ဆလင်
ဆိုတာလဲလက်ခံတယ် ခင်ဗျာပြောတဲ့ သက် တို့ ကမန် တို့လဲလက်ခံပါတယ် ရှေ့ဘုရင်တွေလက်ထက်
ထဲက အမှု့ထမ်းလာခဲ့တဲ့ ကျနော်တို့အသံထွက်နဲ့ခေါ်တဲ့ ရခိုင်”ကသည်း”တပ်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်
သက်လူမျိုးကိုခေါ်တာထင်တာဘဲ(အထင်) ကျနော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်တာက ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်
တွေကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတခုအဖြစ်နဲ့ပါ ခုမှလာပြီးရိုဟင်ဂျာတွေက ခင်ဗျားသံရောင်လိုက်ပြီး
ကျနော်တို့တွေက သက်လူမျိုး ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာတွေပါလုပ်လဲ လက်ကိုမခံနိုင်ဘူး….
ခင်ဗျားကိုတိုင် သက်လူမျိုးဖြစ်နေလို့ ဘာသာတူ မွတ်ဆလင်တွေဘက်ကနာနေရင်တော့
ခင်ဗျားအကြောင်း ကျနော်တို့က ရခိုင်နယ်ကြီး မွတ်ဆလင်တွေကြီးစိုးသွားမှာ အရမ်းစိုးရိမ်တယ်…
ခင်ဗျားလက်ခံရဲ့လား ယောကျာ်းတယောက်က မိန်းမ လေးယောက်လောက်တရားဝင်ယူပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
လုပ်ကြွေးနိုင်ယင်ပေါ့ မိုဟာမက်သခင်ကိုယ်တိုင်တောင် အသက်ကြီးကြီးချမ်းသာတဲ့မုဆိုးမတယောက်ကိုအရင်ရခဲ့တယ် အဲ့ဒီနောက်မုဆိုးမကြီးသေသွားတော့
သူဌေးဖြစ်တယ် ဒီတော့မိန်းမတွေထပ်ယူ ဘာသာပြန့်ပွားအောင်ခလေးများများယူ
ကိုနာဂရရေ….အာဖကန်နစ္စတန်..မလေး..အင်ဒိုနီရှား တချိန်ကအင်မတန် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေ
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနောက်တခါးပေါက်ခေါ်မလား ရခိုင်နယ်မှာမွတ်ဆလင်တွေ များလာတာဟာ
အင်မတန်စိုးရိမ်စရာကောင်တဲ့အချက်ပါ ပြောချင်တာအများကြီးပါ …
ကိုပေရေ. ကိုပေတို ့သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်နာမည်အရင်းရော၊ဖုန်းနံပါတ်ရော၊ဓါတ်ပုံရော မြင်ဖူးတာပါဘဲ။
ကျနော် ရုပ်ရည်ပုံသဏ္ဍာန်က ကိုပေတို ့သိနေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေပုံမဟုတ်ဘူးနော်။အဲဒါရှေး ယခင် ကမန်တိုင်းရင်းသား
တွေက အစအားလုံးဟာ မတူတဲ့ပုံစံ ၊အနေအထိုင်၊အပြောအဆိုနဲ ့ပါ။သံတွဲမှာလဲ ဘာသာပေါင်းစုံရှိပါတယ်။
အားလုံးသော ဘာသာဝင်တွေ ကျွန်တော့်အသက်(၃၀)ထိ ဘယ်တုန်းကမှ အဓိကရုဏ်းမဖြစ်ပွားဖူးပါဘဲ ချစ်ချစ်
ခင်ခင် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား အတူနေထိုင်လာကြတာပါ။
အနီများများထိလေ ပျော်လေမို့များများသာပေးကြပါကုန်။
အင်း ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့သာဆက်ပေတော့ ကိုသားဦးရေ တို့ကတော့ မန်းဂဇက်ကြီးကို နောက်ကနေပဲ ကြည့်နေရရင်တော်ပါပြီ… အချိန်မရှိတော့ သိပ်မငြင်းခုန်နိုင်ဘူး.. ကျောင်းနဲ အလုပ်နဲ.အိမ်လဲ ရောက်ရော
ရပ်တည်ချက်လေးကိုတော့လေးစားမိပါတယ်… ဆက်ပါဦး…. အားပေးပါတယ်..
ကျနော်လဲ ပြန်စိမ်းပေးချင်ရဲ. ဒါပေမဲ.စဉ်းစားကြည့်မိတယ်… မထူးပါဘူးလေဆိုတော့… အများနဲ.တစ်ယောက် စိမ်းလဲခဏပါပဲ…. အရောင်တွေကိုဂရုမစို်က်နဲ့နော်…
လောလောဆယ်ခင်ဗျား Group တစ်ခုလစ်တော့မယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်
FB မျာပြောတာနော်………. ;-)
@ကိုရင်မောင်ရေ. ခုအနေမှာလဲ ကမန်မျိုးနွယ်စုက လူနည်းစုပါဘဲဗျာ။
သိပါတယ်ဗျာ။နို ့ပေမယ့် အနီဘဲလိုချင်တာ။ပြန်စိမ်းနေပြန်ပီ။ခုတမျိုး
@captainamerica ရေ ဖေ့စ်ဘွခ်အကောင့်လိုချက်တာလား၊ယူပါစေဗျား။
ဘယ်သူလုပ်နေတာကိုလဲ သိပါတယ်။ကျနော်နဲ ့ကိုစည်သူအောင်နဲ ့ကခေသူ
တွေ မဟုတ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါ။
ခင်ဗျား Account DDos နဲ.တိုက်ခံနေရဘီ……..
The First Anglo-Burmese War (Burmese: ပထမ အငျ်ဂလိပျ မွနျမာ စဈ; [pətʰəma̰ ɪ́ɴɡəleiʔ mjəmà sɪʔ];5March 1824 – 24 February 1826) was the first of three wars fought between the British and Burmese Empire in the 19th century. The war, which began primarily over the control of northeastern India, ended inadecisive British victory, giving the British total control of Assam, Manipur, Cachar and Jaintia as well as Arakan and Tenasserim. The Burmese were also forced to pay an indemnity of one million pounds sterling, and signacommercial treaty.
The war was the longest and most expensive war in British Indian history. Fifteen thousand European and Indian soldiers died, together with an unknown number of Burmese army and civilian casualties. The high cost of the campaign to the British, five million pounds sterling to 13 million pounds sterling (roughly 18.5 billion to 48 billion in 2006 US dollars), led toasevere economic crisis in British India in 1833.
For the Burmese, it was the beginning of the end of their independence. The Third Burmese Empire, forabrief moment the terror of British India, was crippled and no longerathreat to the eastern frontier of British India. The Burmese would be crushed for years to come by repaying the large indemnity of one million pounds (then US$5 million),alarge sum even in Europe of that time. The British would make two more wars againstamuch more weakened Burma, and swallow up the entire country by 1885.
၁၈၂၆ မှာ မြန်မာကအင်္ဂလိပ်ကို စစ်ရှုံးပြီး Assam, Manipur, Cachar and Jaintia as well as Arakan and Tenasserim နယ်တွေ.. အင်္ဂလိပ်ပေးလိုက်ရတယ်.
မြန်မာလွတ်လပ်ရေးရတော့.. အာသံ၊ မဏိပူရက.. အိနိ္ဒယအောက်ရောက်သွားတယ်..
အဲဒီမဏိပူရမှာနေတဲ့.. သူတွေက.. ဘယ်သူတွေလည်း.
ဗမာတွေရခိုင်ကိုမသိမ်းခင်.. လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ်၃၀ဝကျော်.. ရခိုင်အင်ပါယာခေတ်က.. အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲကနယ်တွေတော်တော်များများ.. ရခိုင်ပိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုရင်ကော..
သဂျီးပေါဒဲ့ ရခိုင်မင်းတွေလက်ထက်က နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားကို နောက်ဆုံးဝှက်ဖဲအဖြစ် အသုံးချမယ်၊ ချလည်းချရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အထား သမိုင်းမှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ လာမည့်နှစ်များအတွင် ဒီအရေး ပိုကြီးလာဖွယ်ရှိဒယ်။ ပြည်တွင်းညီညွတ်မှု ဘယ်လောက်ထိ စုစည်းထားနိုင်မလည်းနဲ့ အရည်အချင်းရှိ ခေါင်းဆောင်များ အစိုးရအဖွဲ့ ရှိမရှိအပေါ်မူတည်ပီး ပြသနာ အတိမ်အနက် ကွာသွားပါမယ်။ နိုင်ငံတဂါ အမြင်မှာ (အနည်းဆုံးဒေါ့ အထောက်အကူပေးရေး အန်ဂျီအိုအဖွဲ့များ) ရိုဟင်ဂျာများ အဖိနှိပ်ခံများအဖြစ် စာနာမှုရနေဒယ်။ အဲဒါကို တိုက်ဖျက်ဖို့ အစိုးရတဖွဲ့ထဲ မစွမ်းနိုင်ဘူး။ ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး စိတ်ပါလက်ပါ ထောက်ခံအားပေးမှ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိဒဲ့ နိုင်ငံတဂါဖိအား လှိုင်းတံပိုးကို တောင့်ခံနိုင်မယ်။
ဗမာတွေရခိုင်ကိုမသိမ်းခင်.. လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ်၃၀ဝကျော်.. ရခိုင်အင်ပါယာခေတ်က.. အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထဲကနယ်တွေတော်တော်များများ.. ရခိုင်ပိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာလဲမှန်မှာပါ
ကဲ အဲ့ဒီလူတွေကို ဘယ်နိုင်ငံကယူမလဲ လက်ညှိုးထောင်…
အရေးထဲ လူက ချီးထုပ်ဖြစ်ရတယ်လို ့ဗျာ။အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာလဲ
ကြိုက်လွန်းလို့ ဖေ့(စ်)ဘုတ်ကစာလေးကို ပြန်ကူးထားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဗုဒ္ဒဘာသာမဟုတ်တဲ့ တခြားဘာသာတွေကို ဖိနှိပ်မှု တကယ်နည်းပါးတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဥပမာတစ်ခုပဲ ပြောပါမယ်။ လူ့အခွင့်အရေးကို အသံကျယ်လောင်ဆုံး အော်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် NewYork လို မြို့ရဲ့ မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဗလီအကြီးကြီး တည်၊ သောကြာနေ့တိုင်း prayer လုပ်ပြီး အော်လံကြီးနဲ့ မွတ်စလင်တွေ ဝတ်ပြုလို့ရပါသလား၊ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးတည်ပြီး ဘုန်းကြီးတွေ တရားဟောလို့ရပါသလား၊ သွားကြည့်ပါ Cathedral နဲ့ Church တွေပဲ အများဆုံး တွေ့ပါမယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ ခေါင်းလောင်းထိုးသံတွေပဲ ကြားရပါမယ်။ Australia က Sydney လိုမြို့ကြီးမှာဆိုလည်း မွတ်စလင် ဘာသာဝင် ဗလီ အဆောက်အဦးတွေကို မြို့ပြင်မှာပဲ တွေ့ရပါတယ်။ လူမိုက်တွေ ပေါပါတယ်ဆိုပြီးနာမည်ပျက်တဲ့အနောက်ဘက် နေရာတွေမှာပဲ ဗလီတွေရှိပါတယ်။ ဒါလည်း သောကြာနေ့ကို မြန်မာပြည်မှာလို အသံချက်စက်နဲ့ ဝတ်မပြုရပါဘူး။ ဟိုတလောတုန်းက Sydney အကြီးဆုံး ဗလီကို ရဲတွေဝင်စစ်တာ လက်နက်တွေအများကြီး နဲ့ Terrorist ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖမ်းမိလိုက်သေးပါတယ်။ ကျွန်တော် သတင်းတွေပြောနေတာပါ။ ဘယ်ဘာသာကို မှ တိုက်ခို်က်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အချုပ်အားဖြင့်ပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာတိုင်းကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ခင်များတို့ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်၊ မြို့လည်ခေါင်မှာ အကြီးဆုံး ဗလီကြီးဟာ ဆူးလေနဲ့ ကပ်ရက်ပါ။ သောကြာနေ့ ဝတ်ပြုဖို့ အသံချဲ့စက်နဲ့ ဝတ်ပြုရင် ဆူးလေပေါ်က တရားထိုင်နေတဲ့ ယောဂီတွေ ခင်များတို့ကို ဘာပြောလို့လဲ။ နောက်ထပ် Saint Mary Cathedral, Emmanuel Church, U Naw Memorial စတဲ့ခရစ်ယာန် အဆောက်အဦ အားလုံးဟာ မြို့လည်ခေါင်တွေချည်းပဲ။ Sri Kali ဟိန္ဒူ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရော ဘယ်နားမှာ တည်ထားလဲ သိကြမှာပါ။ ပန်းဆိုးတန်း အထက်ဘလောက်က မီးပွိုင့်ဘေးက ဝိုင်းအကြီးကြီးနဲ့ အဆောက်အဦတစ်ခုကရော ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးလား၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းကြီးလားဗျာ။ တနင်္ဂနွေနေ့ခေါင်းလောင်းတီးတော့ရော ကျုပ်တို့ ဘာပြောလဲဗျာ။ ဘာမှ အနှောက်အယှက်မရှိဘူးမဟုတ်လား။ ဟိုတလောက Ausi က နာမည်ကြီး TV channel တစ်ခုရဲ့ နာမည်ကြီး Presenter တစ်ယောက်က မြန်မာပြည် အစီအစဉ်လာရိုက်ရင်း တီဗီထဲမှာ ပြောသွားတာက “ရန်ကုန်ကို ကျွန်တော် အလေးစားဆုံး နဲ့ အကြိုက်ဆုံးအချက်က မတူတဲ့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကွဲတွေ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နေတဲ့ မြင်ကွင်းပါပဲဗျာ”တဲ့။
တခါတည်းကြုံလို့ ခရစ်ယာန် မောင်နှမတွေကိုပါ ပြောလိုက်မယ်။ ခင်များတို့ တွေ Mission ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လုပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ နိုင်ငံတွေထဲမှာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံလည်း ပါတယ်။ အာဖရိကမှာ ခရစ်ယာန် ၇၂ ယောက် ကို မွတ်ဆလင်တွေ မီးရှို့သတ်ပစ်တာ သိချင်ရင် ကျုပ် Link ပေးလိုက်မယ်လေ။ ဒီမယ်။ကျုပ်ပြောမယ်။ အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်ကို နင်းပြီး ခင်များတို့ ဘာသာရေး အမြတ်မထုတ်ချင်ပါနဲ့။ မြန်မာမြေပေါ် မှာ နေ၊ မြန်မာ့ဆန်စားနေရင် အများစုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ မျက်နှာကို တော့ မကြည့်ရင်တောင် အိုးမည်းတော့ မသုတ်ချင်ကြပါနဲ့ ….
ဆွေးနွေးချင်တယ်၊ ကန့်ကွက်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျုပ် Wall ပေါ်မှာ လာရေးလှည့်… အားလုံးကို လေးစားတယ်။ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်တယ်
… ရှေးစွန်းစွဲတွေကလည်း.. ဒါမျိုးဆို..သိပ်ကြိုက်..
မြှောက်ပေး.. (ေ-ွး)တက်အောင်.. ပေးထားတဲ့.. တီးလုံးအတိုင်းလိုက်ကကြ..
အင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာ.. မျက်စိတွေနားတွေဖွင့်ပြီး..ကိုယ်ဘယ်နေရာရောက်နေလည်း.. သေသေချာချာ သိကြပါ..
ပါဗ့လစ်အီးယားပေါ်လူးရှင်း( လူကြားထဲ..အသံကျယ်မအော်ရ) စည်းကမ်းလုပ်ထုံးတွေအကြောင်းလည်း.. နားမလည်ပဲ..စွတ်တင်တာအပြင်.. မနှစ်ကတင်..ပြဿနာတက်နေတဲ့… (အစွန်းရောက်တွေဝင်ဖြီုချလိုက်တဲ့.. တွင်တာဝါနားလေးတင်.). ဗလီဆောက်ခွင့်တောင်.. အခုဆို..ရလောက်နေပြီ..။ အစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူတယ်လေ..။
Islamic Center Exposes Mixed Feelings Locally – The New York Times
Aug 19, 2010 – The debate over building an Islamic Center near ground zero has attracted the views of many, including those of Muslim residents in New York …
The Islamic Cultural Center of New York isamosque and Islamic cultural center in the borough of Manhattan in New York City, United States. It is located at 1711 Third Avenue, between East 96th and 97th Streets. The Islamic Cultural Center was the first mosque built in New York City. The mosque’s older dwelling inatownhouse at 1 Riverside Drive, is still in continual prayer use asasatellite location.
မြန်မာပြည်ဟာ..ကမ္ဘာပေါ်မှာ..ဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်ဆုံး…တိုင်းပြည်တခုအဖြစ်.. ၁ဝနှစ်မက ရပ်တည်ခဲ့တယ်..
ထွက်ရင်.. ဒီတခါတော့.. နံပါတ် တစ်(တစ်) ဖြစ်လောက်တယ်..
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲတင်..ပိုအင်အားကြီးတဲ့.. မဟာယာနကို.. လုံးဝသာသနာပြုပေးမလုပ်ဘူး..
ထေရဝါဒထဲ.. ဂိုဏ်းအစိတ်စိတ်ကွဲနေပြီး.. အင်အားကြီးတဲ့သူက.. (လုံးဝ)လုံးဝဖိနှိပ်အနိုင်ကျင့်ထားတယ်.
…ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံတွေက.. သတ်ပစ်..ဖမ်းချုပ်..ထောင်ချ ဆိုတာတွေကို.. အလွယ်တကူပြောတယ်..
Burma Among Worst For Religious Freedom: Report | The Irrawaddy …
Mar 29, 2012 – Burma has been declared one of the world’s worst countries for religious freedom as reports emerge of places of worship being savagely ..
တွေ ့လား..တွေ ့လား..
နဲနဲလေးပြောမိတာနဲ့အမေဒစ်ကန်ဘက်က နာနေတာ..
အမေဒစ်ကန်ကို ဒိုဟင်ဂျာတွေသာ ဝင်စီးရင် ဘိုများနေမလဲသိဘူး..
မာမီပုပြောခိုင်းလို့လာပြောပေးဒါဘာ..
@ကိုမိုးတိမ်ရေ——-သူကြီးက ပြန်ဖြေထားလေတော့ ကျနော်တောသားဉာဏ်မမှီလေး
အဆင်သင့်သွားသပေါ့ဗျာ။ကျေးဇူးကိုခိုင် ။အထောက်အထားသာမပါရင် ကျနော်လဲ ပြန်
@မျက်ကန်းမျိုးချစ်များ—ပေးလော့ အနီ။တစ်ခု နှစ်ခုတော့မရဘူးနော်။အနည်းဆုံး(၁၀၀)
@ကိုမိုးတိမ်ရေ တကယ်ကို ဖတ်ပြီး စဉ်းစားလဲသွားပါတယ်။သူကြီး၏လင့်ခ်ကို ငပေါလေး
…ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံတွေက.. သတ်ပစ်..ဖမ်းချုပ်..ထောင်ချ ဆိုတာတွေကို.. အလွယ်တကူပြောတယ်..””
ဘာသာရေး ဖိနှိပ်တယ်လို့ အော်နေတာကလဲ အဲတုန်းက အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ မကြည်တုန်းပါခင်ဗျ။
ခင်ဗျားနဲ့ ကျုပ်နဲ့မကြည်ရင် ခင်ဗျားကျုပ်အကြောင်းအကောင်းပြောမလား။
သူတို့ကျောက်တုံးကြီးရှိတဲ့နေရာကိုလဲ အခြားဘာသာဝင်တွေ ဝင်ရင်သတ်ခွင့်တောင်
မဟာယန ကိုကိုးကွယ်တာ တရုတ်တွေများပါတယ်။ဘုံကျောင်းတွေကို ဘယ်သူကများ
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲ မတူပဲခွဲထွက်တွေးလာတဲ့သူတွေကို အစိုးရကလုပ်လို့ပါဘူးဗျ။
မဟာ သံဃနာယက အဖွဲ့စည်းကြီးက စစ်ဆေးပြီး ဆောင်ရွက်နေတာပါ
ဦးဝီရသူအား ဆုံးမဩဝါဒပေးရန် သံဃာမဟာနာယကအဖွဲ့က စာထုတ်ပြန်
…ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ခံတွေက.. သတ်ပစ်..ဖမ်းချုပ်..ထောင်ချ ဆိုတာတွေကို.. အလွယ်တကူပြောတယ်”.. အဲဒါ က အစိုးရ ( အာဏာရှင် ) တွေ နဲ့ သူတို့ နဲ့ နီးစပ်တဲ့ လက်တဆုပ် စာ ရဟန်း တချို့ လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်၊
ဗုဒ္ဓဘာသာထဲတင်..ပိုအင်အားကြီးတဲ့.. မဟာယာနကို.. လုံးဝသာသနာပြုပေးမလုပ်ဘူး”.. ဒါကလည်း ထေရဝါဒ သာသနာ ကို စောင့်ရှောက် ကာကွယ် နေတဲ့ တခုတည်း သော နိုင်ငံ ဖြစ်လို့ပါပဲ၊ ဥပမာ တော့ မပေး ချင်တော့ပါဘူး၊ ဘာသာရေး ဖြစ်နေလို့၊
“မနှစ်ကတင်..ပြဿနာတက်နေတဲ့… (အစွန်းရောက်တွေဝင်ဖြီုချလိုက်တဲ့.. တွင်တာဝါနားလေးတင်.). ဗလီဆောက်ခွင့်တောင်.. အခုဆို..ရလောက်နေပြီ..။ အစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူတယ်လေ..”
အဲဒီ အစိုးရ ကိုတော့ လေး စားပါတယ် ၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ အစိုးရ က အဲဒါမျိုး သဘောကျ မှာကိုတော့ ကြောက်တယ်၊ မတော် ရွှေတိဂုံ ကုန်းတော် နားက ပြည်သူ့ ရင်ပြင် လောက်မှာ လာပီး ဗလီကြီး ဆောက် နေမှ ဒွတ်ခ ၊ ပြောလို့ သာ ပြောတာပါလေ၊၊၊ ရွှေတိဂုံ ဘုရား ကြီး ဆို တာဟာလည်း တနေ့နေ့ တချိန်ချိန်ကျရင်၊၊၊ အနိတ်စ။
ငြင်းကြတော့ ဝင်ဖတ်တဲ့သူ ဗဟုသုတများတယ်
ဒါမဲ့ တယောက်တမျိုးဆိုတော့ ခေါင်းတောင်မူးတယ်
အဲဒါရှင်းနေတာပဲလေ။မှားနေရင် သံဃာမဟာနာယက အဖွဲ့ကရှင်းပေးရမယ်လေ။
မှားလားမှန်လားဆိုတာ သံဃာမဟာနာယက အဖွဲ့စည်းကြီးကပဲရှင်းပေးရမယ်လေ။
သမိုင်းထဲမှာ ထင်ရှားတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမဟာ
ရခိုင် ဆရာတော်တစ်ပါးလဲဖြစ်တဲ့အပြင် နယ်ချဲ့ ဆန ့ကျင်ရေးမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့သူပါဘဲ။
နောက်ပိုင်း ၂၀၀ရမှာ ရှင်ဂမ္ဘီရတို ့လို ဘုန်းကြီးတွေ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ဗျ။လူဝတ့်တောင်
@သူကြီးရေ-ဆရာတော် ဝီရသူ၏ သဘောထားဆိုပြီး ပို ့စ်တင်ပြီးကတည်းက